WordPress Plugin: Midira mora amin'ny Teleport
Efa te-hanitsy pejy na lahatsoratra amin'ny WordPress ve ianao ary kivy noho ny tsy fahaizanao nitady sy nahita ilay lahatsoratra? Ahoana ny fahafahanao manampy lahatsoratra vaovao mora foana? Ahoana ny fahitana ny pejy fidirana mora foana? DK New MediaIlay mpamorona mahatalanjona, Stephen Coley, dia nanome valiny izay tian'ny mpampiasa WordPress tsirairay… Teleport.
Teleport dia menio kely mangatsiaka kely ho an'ny bilaoginao WordPress nampiantrano anao izay miseho rehefa tianao amin'ny fikitihana fotsiny ny "w". Ny hitsin-dàlana fitendry hafa dia misy:
e - (Ovay) Ovay ny lahatsoratra / pejy ankehitriny
d - (Dashboard) Mamily ny Dashboard
s - (Fikirana) Mamily ny pejy fanovana
a - (Archive) redirect amin'ny Lahatsoratra / Pejy / Karazan-doka manokana
q - (Miala) Mamoaka ny mpampiasa ankehitriny / Manitsy ny pejy Hiditra
w - Misokatra na hanidy Teleporter
esc - Manidy ny Teleporter
Ka raha mahita typo ianao amin'ny iray amin'ireo pejinao… tsindrio fotsiny ny "w" arahin'i "e" sy voila! Mandefa telefaona mivantana any amin'ny tonian-dahatsoratra ianao amin'izay ahafahanao manitsy ny lahatsoratra ary mamoaka haingana. Ity misy topy topimaso momba ny fomba Teleport miasa:
Stephen dia manana fiasa fanampiny ho avy… fa ity dia plugin mampitolagaga ho an'ny mpampiasa WordPress rehetra!
Tags: stephen coleyteleportWordpress loginmenio fidirana wordpressplugin WordPresshitsin-dàlana wordpress
Aug 21, 2012 amin'ny 9: 02 AM
Tsara izany, ampiako avy hatrany !!